ChannelBurmese | Your Blog Description
Myanmar Subtitles Movies ( မြန်မာစာတန်းထိုး ဇာတ်ကား )
အခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရီးယားကားပါ ။
ဒီကားထဲမှာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် နာမည်ကြီးသရုပ်ေဆောင်တွေ ပါဝင်ထားသလို
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် တည်ဆောက်မှုကလည်း တကယ့်ကို ကောင်မွန်လှပါတယ် ။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလ စစ်ပြီးခါနီး ဖြစ်ရပ်မှန် ကိုရီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘ၀ ...
ဂျပန်တွေရဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို ထိထိမိမိပြန်လည်မြင်တွေ့ နိုင်အောင် ပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့
ဇာတ်ကားဆိုလဲ မမှာပါးဘူး ...
ဒီဇာတ်ကားဟာ မထွက်ခင်ကတည်းက လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရသလို
ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ အချိန်မှာလဲ အလွန့်အလွန်ကို အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့ပါတယ် ။
ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖို့ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် ။
ရုံတင်ပြီး တစ်ပါတ်အကြာမှာပဲ အရင်းကြေတဲ့အပြင် အမြတ်ပါထွက်ခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် ChannelBurmese မှ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်
မြန်မာစာတန်းထိုး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
DownLoad Link ==>> Watch and Download
Labels: 2017, Action, Drama, Fantasy
ပရိတ်သတ်တွေ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ သရဲကားလေး အကြည်ထွက်ပြီဖြစ်လို့
ChannelBurmese မှ မြန်မာစာတန်းထိုး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီကားထဲမှာဆိုရင် Annabelle ဆိုတဲ့ကလေးမလေးဟာ
ကား မတော်တဆဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။
မိဘတွေကလည်း သမီးလေးကို အရမ်းချစ်ကြတဲ့ အပြင် ရုတ်တရက် ဆုံးသွားရတဲ့
သမီလေးကို နောက်ဆုံးအကြိမ် စအားပြောဆိုခွင့်ရ၇န် ဆုပန်ခဲ့ကြပါတယ် ။
မိဘတွေရဲ့ ဆုတောင်းပြည့်တယ်ပဲပြောရမလား ....
မိဘတွေမသိလိုက်တာကတော့ ပြန်ရောက်လာတာ သူတို့ သမီးလေးမဟုတ်ပဲ
ပရိတ်သတ်ကြီးကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ChannelBurmese မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Translated by Thurain
Labels: 2017, Horror, Thriller
'မိုတီမာ' သူကတော့ စာအုပ်ချုပ်သမားတယောက်ပါ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ ဆေးလ်ဗားတော့ဂ် တယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ ...
မိုတီမာရဲ့သမီးလေး အခါလည်အရွယ်လေးမှာ မိုတီမာဟာ သမီးလေးကိုချော့သိပ်ဖို့ Inkheart အမည်ရှိမှော်ဆန်သောစာအုပ်ကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအကြိုးဆက်ကတော့
အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူဆိုးကြီး 'ကပ်ပီကွန်' ကစာအုပ်ထဲကထွက်လာခဲ့ပီး မိုတီမာ ရဲ့ဇနီးကတော့ စာအုပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ် ......
Translated By Zay Latt Yar
Video File Size - 670MB
Labels: 2008, Action, Fantasy
Baywatch - 2017 (HD)
အလုပ်​တာဝန်​​ကျေ​အောင်​အမြဲကြိုးစား​နေတဲ့သူ ​ခေါင်း​ဆောင်​​ကောင်းပီသူ ...
ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ကမ်း​ခြေမှာ မူးယစ်​​ဆေးဝါး ​​ရောင်းဝယ်​တာ​တွေ လူသတ်​မှု​တွေဖြစ်​လာချိန်​မှာ​တော့ ...
ရဲတပ်​ဖွဲ့ရဲ့ ​ပေါ့​လျော့မှု​တွေ ကိုင်​တွယ်​မှုညံ့ဖျင်းမှု​တွေက
တဖက်​မှာလဲ သူ့ရဲ့ကယ်ဆယ်​​ရေးအဖွဲ့ကို လူသစ်​​တွေတိုးလာခဲ့တယ်​....
ထူးခြားတာက... ဘော်ဒီ .... သူက​ရေကူးချံပီယံ ​ရွှေတွဆိပ်​နှစ်​ခုပိုင်ရှင်​ မိမိကိုမိမိအထင်​ကြီးနေသူ...
မစ်​ခ်ျ​ ... နဲ့မျက်​နှာ​ကြောမတည့်သူ ...
ဒါ​ပေမဲ့တ​နေ့မှာ မစ်​ခ်ျ​နဲ့အဆင်​​ပြေသွားမလား ....
မစ်​ခ်ျ​ က​ရော ရဲတ​ယောက်​မဟုတ်​ပဲ သာမန်​ကယ်​​ရေးသမားတ​ယောက်​အ​နေနဲ့
မစ်ခ်ျ​နဲ့ ဘော်ဒီ ...ပူး​ပေါင်းနိုင်​မလားဆိုတာ​တွေက​တော့.........
ဒီဇာတ်​ကားကို မင်းသားကြီး The Rock[ Dawyne Johnson] နဲ့
အိန္ဒိယမင်းသမီး​ချော ပရီယန်းကား ချိုပရား တို့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​....
IMDB မှာ 5.8/10 သာရထား​ပါတယ်​.... ဇာတ်​လမ်းကသာမန်​မျှသာဖြစ်​​ပေမဲ့ ပင်​လယ်​ကမ်း​ခြေသ​ဘောအတိုင်း​ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးရိုက်​ကူးတာမို့ အပန်း​ဖြေကြည့်​ရှုသင်​တဲ့ဇာတ်​ကား​လေးဖြစ်​တာ​​ကြောင့်
ChannelBurmese မှ မြန်မာစာတန်းထိုးတင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ရပါတယ်​.....
Subtitle by Zay Latt Yar
File Size - 1.3GB ( 720p HD )
File Size - 191MB ( Small Size )
Labels: 2017, Action, Comedy, Drama
ဒီနေ့ မှာတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းလောက်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့
Kung Fu Yoga ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား HD ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်သောကြောင့်
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ တရုတ်ပြည်နဲ့အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံမှ
သရုပ်ဆောင်များ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး ပရိသတ်ကြီးကို
အကောင်းဆုံးသော ရသတွေပေးစွမ်းထားပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖိုက်တင်မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချမ်းကတော့
ရှေးဟောင်းသုသေသန ပညာရှင်အနေနဲ့ ပါဝင်ထားပြီး
ရာဇ၀င်ထဲမှာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ရတနာတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ် ။
တစ်ဖက်မှာလဲ ထိုပစ္စည်းတွေကို သူတို့ သာလျှင် ပိုင်ရှင်အစစ်လို့ ထင်မှတ်ထားပြီး
အသဲအသန် ရှာဖွေနေတဲ့ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဖွဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ဆုံမှုမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ....
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလို ကြည့်ရှုလို့ လည်း တကယ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့်
ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သတ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေ အတွက်တော့
လက်မလွှတ်ပဲကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ် ...
Translated By NayLin
Openload ( 720p HD ) 961MB
Openload (360p) 455MB
Labels: 2017, Action, Comedy
Transformers သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ဇာတ်လမ်းသစ်အဖြစ် Transformers: The Last Knight ကို ကျူးဘားနိုင်ငံ မြို့တော် ဟာဗန်နာတွင် စတင်ရိုက်ကူး ခဲ့သည်။
ယင်းဇာတ်ကားသည် Transformers ဇာတ် လမ်းတွဲ၏ ပဉ္စမမြောက် live-action ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့သည့် Transformers: Age of Extinction ဇာတ်ကား၏ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားလည်းဖြစ်သည်။
ယင်းဇာတ်ကားသစ်သည် Transformers ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏ ပင်တိုင် ဖန်တီးရှင် ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ဘေး၏ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။
Transformers: The Last Knight ဇာတ်ကား သစ်တွင် ပင်တိုင်မင်းသား မာ့ခ်ဝဲလ်ဘတ်ခ်နှင့် သရုပ်ဆောင်အချို့လည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာကြပါတယ် ...
Transformers သိပ္ပံဇာတ်ကား၏ ဒုတိယ မြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် Revenge of the Fallen ကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကလည်းကောင်း၊ တတိယ မြောက်ဇာတ်ကား Dark of the Moon ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ကလည်းကောင်း၊ စတုတ္ထမြောက်ဇာတ်ကား Age of Extinction ကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က လည်းကောင်း ဖြန့်ချိပြသခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပဉ္စမမြောက်ဇာတ်ကားကို ယခုပြသ လျက်ရှိကာ Transformers6ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြသသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Transformers ဇာတ်ကားများအားလုံးသည် ဝေဖန်သူများ၏ အပြုသဘောမဆောင်သည့် တုံ့ပြန်ချက်များကိုသာ လက်ခံရရှိခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထက်တိုင် ရုံဝင်ငွေအားကောင်းလျက်ရှိပြီး ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကတွင် အောင်မြင်နေဆဲ ဇာတ်ကားများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (မျိုးစန္ဒာမောင်)
message Box နှင့် Chat Box ကနေတောင်းဆိုထားကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် Transformers: The Last Knight - 2017 ကို မြန်မာစာတန်းထိုး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Translated By NayLin & Htet Htet
File Size - 1GB ( 720p )
File Size - 698MB ( small size )
Channel Burmese .
Labels: 2017, Science fiction
Minion တွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ Despicable Me ရဲ့ သုံးကားမြောက်ကတော့ ထွက်လာခဲ့ပါပီ.....
ဒီကားထဲမှာတော့ Gru က တချိန်က ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဟောလိဝုဒ်ကနေ
ကန်ထုတ်ခံလိုက်ရလို့ စိတ်နာနေတဲ့ လူဆိုးကြီး ဘရတ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဂုရုဟာ ဘရတ်ကို လက်ရမဖမ်းဆီးနိုင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ အေ့ဂျင့်အလုပ်ကနေ
စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ ဂုရု ဆီမထင်မှတ်တဲ့ သတင်းတခုရောက်လာပါတော့တယ်..
အဲ့ဒါကတော့ သူ့မှာ အမွှာညီတယောက်ရှိနေတာပါပဲ
သူ့အမွှာညီနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ဂုရု တယောက်ပျော်ရွှင်နိုင်မလား...
လူဆိုးကြီး ဘရတ်ကိုရော ဘယ်လို ဖမ်းဆီးမလဲ....
ဂုရု ရဲ့ ဇနီး လူစီ နဲ့ မွေးစားသမီလေးတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ
မီနီယမ်လေးတွေကရော ဘယ်လိုအခန်းကနေ ချစ်စရာကောင်းအောင် ပါဝင်ထားလဲ .........
Channel Burmese ကနေ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.....
FileSize - 852MB 720p HD (OpenLoad)
FileSize - 294MB 36op (OpenLoad)
Labels: 2017, Cartoon
The Mummy 2017 ရုံတင်ကားသစ်ကြီးကို
ChannelBurmese ပရိသတ်ကြီးအတွက် မြန်မာစာတန်းထိုးပြီး
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ မင်းသားကြီး တွမ်ခရုမှ အဓိက ဇာတ်ဆောင်နေရာနေပါဝင်ပြီး
ဇာတ်ကားကြီးကို ရသမြောက်အောင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ။
Mummy ဇာတ်ကားတွေကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ အားပေးလာကြတဲ့
ပရိသတ်ကြီးအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့စေမှာ သေချာပါတယ် ။
ဒီကားထဲမှာ တွမ်ခရုက စစ်ထောက်လှမ်းရေး ...
မထင်မှတ်ပဲ ရှေးခေတ် အီဂျစ်တို့ရဲ့ အမွေအနှစ် သင်္ချိုင်းဂူကြီးကိုတွေ့ခဲ့တယ် ။
ထို သင်္ချိုင်းထဲမှ အလွန်ထူးဆန်တဲ့ အခေါင်းတလားကြီးတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး
အန္တရယ်ဆိုးတွေမထင်မှတ်ပဲ ကျရောက်လာခဲ့ ပြီး
တွမ်ခရုတစ်ယောက်သာ မယုံနိုင်ဖွယ် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီအခေါင်းတလာကြီးထဲမှာရော ဘာတွေရှိနေမလဲ ...
နောက်ထပ်ပြီးတော့ ဘယ်လို သည်းထိတ်ရင်ဖိုအဖြစ်ပျက်တွေ ထပ်မံကြုံတွေ့ရဦးမလဲ ...
တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို အရမ်းလည်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အရမ်းကြည့်ချင်ပြီး မကြည့်ရသေးတဲ့ ပရိသတ်များအတွက် ChannelBurese မှ
Labels: 2017, Action, Fantasy
တရုတ်ပြည်ရဲ့ မဟာတံတိ်ုင်းကြီး ဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ ။
မဟာတံတိုင်းကြီးကို အခြေခံပြီး ရှေးဒဏ္ဏာရီလာ ပုံပြင်တွေနဲ့ ရောဆက်ပြီး
ရိုက်ကူးပုံပေါ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ အနောက်တိုင်းသား တွေဟာ ယမ်းမှုန့်တွေကိုရှာဖွေဖို့ ခရီးဆက်လာရင်း
တရုတ်ပြည်နယ်နိမိတ်အတွင်းကို ရောက်ရှိလာကြပါတယ် ။
ဓါးပြများနှင့် အခြားသော ဘေးအန္တရယ်များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောကြောင့်
တစ်ဖွဲ့လုံးတွင် နှစ်ဦးသာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ရပါတယ် ။
ထိုနှစ်ဦးမှာလည်း ဓါးပြများရဲ့ လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကြောင့် ထွက်ပြေးရင်း
တရုတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံကာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ် ။
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ထိုအချိန်ဟာ တရုတ်ပြည်အတွက်
အန္တရယ်ပေးမယ် သတ္တဝါဆိုးကြီးတွေ နိုးထလာတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီသတ္တဝါဆိုးတွေ လက်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်အောင် ဘယ်လို တိုက်ခိုက်ကြမလဲ ......
အနောက်တိုင်းသားနှစ်ဦးကရော ဒီသတ္တဝါ ဆိုးကြီးတွေကို ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနိုင်မလား ...
ဒီ သတ္တဝါဆိုးတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ခက်ခက်ခဲခဲ နှိမ်းနှင်းခဲ့ရလဲဆိုတာ ကို
Subtitle By Aung Myint Oo
Video File Size - 720p ( 823MB )
Video File Size - 360p ( 380MB )
Labels: 2016, Chinese, Fantasy, Mystery, War
ဒီနေ့မှာတော့ အာလုံးအကြိုက်တွေ့စေမယ့် စက်ရုပ် အက်ရှင် ဖိုက်တင်ကား အလန်းလေးနဲ့
စက်ရုပ်တွကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ အကြွေးပတ်ပတ်လည် ဝိုင်းနေတဲ့ ချာလီ .....
ချာလီ ဆီမှာ မရင်းနှီးတဲ့ ၁၀ အရွယ် ဂျစ်ကန်ကန်သားတစ်ယောက်ရှိတယ် ။
သားဖနှစ်ယောက် ပေါင်းမိပြီး ကောက်ရတဲ့ စက်ရုပ်နဲ့ ကြေးစားလက်ဝှေ့ ပွဲတွေကို
ဝင်ရောက်ထိုးသတ်ရင်း နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ် ။
စက်ရုပ်ရဲ့ နာမည်က .... အက်ပ်တန် ....ပါ
နာမည် ကြီးလာတဲ့ အက်ပ်တန် ဟာ Real Steel ကမ္ဘာ့ ချန်ပီယံ ပွဲရဲ့ ချန်ပီယံကို စိန်ခေါ်ပြီး
ဘယ်လို ဖိုက်တင်ပလေးကြမလဲဆိုတာကို အောက်က link ထဲမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
Subtitle By WK Thu
Video File Size - 720p ( 938MB )
DownLoad Link 1 ==>> Watch and Download
Video File Size - 360p ( 450MB )
DownLoad Link2==>> Watch and Download
Labels: 2011, Drama, si-ci, Sport
2017 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့ XXX ဇာတ်ကားသစ်ကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
XXX ဆိုကတည်းက ဘယ်လို ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဆိုတာ
ပြောပြနေစရာမလိုအောင် ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်နှီးပြီးသားပါ ။
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဖိုက်တင် အလန်းလေးတွေနဲ့ စွန့် စားခန်းတွေက
ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့ မှာ သေချာပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အက်ရှင်ကားကောင်းတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သတ်တဲ့
ပရိသတ်ကြီးအတွက် ChannelBurmese မှ မြန်မာ စာတန်းထိုး
File Size - HD ( 970MB )
Labels: 2017, Action, Thriller
စောင့်မျှော်နေကြတဲ့Pirates of the Caribbean 5ဖြစ်တဲ့ Dead men tell no tales ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးထွက်လာပြီ
ထုံးစံအတိုင်း ကပ္ပတိန်ဂျက်စပဲရိုးရဲ့ (ကပ္ပတိန် ထည့်ခေါ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် ဂျက်က ကပ္ပတိန်ထည့်ခေါ်မှကြိုက်တာ ) စွန့်စားခန်းကြီးကိုလဲ ထပ်မြင်တွေ့ရဦးမှာပါ
ထူးထူးခြားခြားပဲ ကပ္ပတိန်ဂျက်ရဲ့ ငယ်ငယိကပုံကိုလဲ မြင်တွေ့ရဦးမှာပါ ပုလင်းထဲထည့်ခံထားရတဲ့ ပုလဲနက်သဘောင်္ကြီးကလဲ ပိုင်ရှင်အစစ်လက်ထဲပဲ ပြန်ရောက်သွားပါတယ် ပြီးတော့ အရင်အပိုင်းတွေမှာပါခဲ့သလိုပဲ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေ, မှော်ပညာတွေ ကိုလဲတွေ့ရမှာ
ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့အကျဉ်းကတော့ စပိန်ကပ္ပတိန်ဖြစ်တဲ့( ကပ္ပတိန်Salaza)က ကပ္ပတိန်ဂျက်ကို အသည်းအသန်ရှာနေခဲ့တာပါ Salazaက လူမဟုတ်ပါဘူး Dead manပါ အဲ့အချိန် ကပ္ပတိန်ဂျက်တစ်ယောက် ထုံးစံအတိုင်း အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေနဲ့ အင်္ဂလန်မြို့ထဲမှာရှိနေပါတယ် အရင်အပိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့ မင်းသားရဲ့သားဖြစ်သူက သူ့အဖေရဲ့ ကျိန်စာကိုဖြေပေးချင်နေတဲ့ (ဟင်နရီ)( အရှေ့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေသိမှာပါ ထပ်မပြောတော့ပါဘူးနော် )ဒီကျိန်စာကိုဖြေပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းအရာကတော့ ပင်လယ်နတ်ဘုရားရဲ့ ရတနာပါပဲ အဲ့ရတနာက သုံးခွမှိန်းပါပဲ (mermaidဇာတ်ကားတွေကြည့်ဖူးတဲ့သူဆိုသိတယ် ရေသူထီးဘုရင်ကြီးကိုင်တယ်) ဒီရတနာကြီးတည်ရှိတဲ့နေရာက်ု လမ်းပြနိုင်တဲ့သူက မိန်းကလေး (ကရီနာ) သူမက နက္ခတ်ပညာရှင်ပါ
ကပ္ပတိန်ဂျက်နဲ့ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် ရန်သူလဲဖြစ်တဲ့ (ကပ္ပတိန်ဘာဘ်ုဆာ)ကတော့ သေဆုံးသွားပါတယ် သူဘယ်လိုများ သေဆုံးသွားတာလဲ ပြီးတော့ Salazaက ဘာကြောင့်ကပ္ပတိန်ဂျက်က်ုရှာနေတာလဲ?? ဟင်နရီကရော သူ့အဖေအတွက် ကျိန်စာကိုဖြေပေးနိုင်မလား? 🏻️ဒီရုံတင်ကားကြီးကိုကြည့်ပြီး နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် 🏻
ဒီကားလေးကို Nay Linနဲ့ Htet Htetက ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ
Translated By : Nay Lin & Htet Htet
Encode By : Zar Ni
Labels: 2017, Action, Comedy, Fantasy
Daylight's End - 2016
Zombie နဲ့ လူသားတို့ရဲ့ အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Zombie တွေက သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီ လူသားမျိုးနွယ် ပျောက်ကွယ် ရတော့မယ် အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ် ။
Zombie တွေရဲ့ အင်အားဟာ တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် လူသားတွေရဲ့နယ်ပယ်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့ရပါတယ် ။
Zombie ကိုအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတစ်စုကလည်းရှိနေပါသေးတယ် ။
ထိုသူတွေဟာ Zombie တွေရဲ့ ဝိုင်းရံခြင်းကိုခံထားရပါတယ် ။
ရန်သူတွေကိုထိုးဖောက်နိုင်မှသာ သူတို့တွေရဲ့ ဘဝက မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှင်သန်နိုင်မှာပါ ။
အဲဒီတော့ လူသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ Zombie တွေကို ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်ပြီး လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမလဲဆိုတာကို
အောက်ကပေးထားတဲ့ Link ထဲမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
Subtitle By linthura1988
File Size - 720p (945MB) HD
File Size - 360p (340MB)
Labels: 2016, Action, Horror, Zombie
Sniper: Ghost Shooter - 2016
တစ်ချက်တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပစ်ချက်တွေကတော့ တော်တော် ကြည့်လို့ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ် ။
မောင်းသူမဲ့လေယဉ်ကို အကြမ်းဖက်သမားတွေက နည်းပညာနဲ့ ဖောက်ထွင်းခဲ့ပါတယ် ။
ထောက်လှမ်ရေး စနစ်ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရတာကို အမေရိကန်ဘက်က မသိရှိခဲ့ပေ ။
ထို့နောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေကတော့ အမေရိကန် မရိန်းတပ်သားတွေကို တိတိကျကျ ခြေရာခံပြီး စနိုက်ပါ နဲ့ ဖြုတ်ပါတော့တယ် ။
အဲဒီနောက်မှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ...
အမေရိကန်ဘက်ကရောထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ ဘယ်လို အဆုံးသတ်မှုတွေ ပြုလုပ် သွားမလဲဆိုတာကိုတော့
ChannelBurmese မှ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မြန်စာစာတန်းထိုး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Video File Size - 407MB
Labels: 2016, Action, War
Dapper Koala Buster Moon presides overaonce-grand theater that has
An eternal optimist, andabit ofascoundrel, he loves his theater above all and will do anything to preserve it. Facing the crumbling of his life's ambition, he takes one final chance to restore his fading jewel to its former glory by producing the world's greatest singing competition.
Five contestants emerge:amouse,atimid elephant,apig,agorilla andapunk-rock porcupine.
Video File Size - 450MB
Labels: 2016, Cartoon, Comedy
တောင်းဆိုထားတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မကြည့်ရသေးသော သူငယ်ချင်းများအတွက်
ထိုင်းဟာသ သရဲကားလေး တစ်ကားမြန်မာစာတန်းထိုးပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
စာမကျက်ပဲ ဘွဲ့ရချင်သော သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်
အောက်လမ်း ဂမ္ဘီရတွေသုံးပြီး စာမေးပွဲဖြေမယ်ဆိုပြီး နတ်ကွန်းကိုရောက်လာတယ် ။
အဲဒီမှာ သရဲနဲ့စတွေ့ပြီးခြောက်ခံလိုက်ရတာ ...
ကိုယ်တွေကတော့ ရယ်လိုက်ရတာ ညစ်နေတဲ့ စိတ်တွေပါပျောက်သွားတယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့လဲ တခဏတာ အမောပြေချင်တယ် ဆိုရင် ဒီကားလေးကို ကြည့်သင့်ပါတယ် ။
ဘာသာပြန်ဆိုသူကတော့ Zaw Htet နှင့် Thurain တို့ ဖြစ်ပါတယ်
Translated By : Zaw Htet & Thurain
Encode By : Min Kha
Labels: Comedy, Horror, Thailand
“I don’t need to put eyes on this sick shit,” mutters one of the outlaws in Outlaws And Angels, as he heads out the door of the small farmhouse where most of the movie takes place. Viewers of JT Mollner’s debut feature, which crosses the spaghetti Western with the home-invasion thriller, may share that sentiment. Set in 1887 New Mexico, the film declares its button-pushing intentions immediately, opening with an incongruously vulgar walk-and-talk between two young women that’s interrupted when one of them suddenly gets half of her face blown off byastray bullet. Three bank robbers—Henry (Chad Michael Murray), Charles (Nathan Russell), and Little Joe (Keith Loneker)—flee the scene of their crime, heading for the Mexican border, and eventually wind up taking refuge in the home of the Tildon family, where Henry takesaspecial interest in Florence (Francesca Eastwood), the younger of two daughters. As it turns out, Florence has reason to be rather shockingly cooperative, and blood soon flows freely.
Video File Size - 338MB
Boyka: Undisputed - 2016
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေထဲက
Boyka 2016 ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။
ဗွိုက်ကာ ဆိုတဲ့ MMA လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲများစွာ ထိုးသတ် အနိုင်ယူရင်း
တစ်နေ့မှာ သူဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲကို ရုရှားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ဗွိုက်ကာရဲ့ ထိုးချက်ကြောင့် တစ်ဖက်ကစားသမားဟာ အသက်ပါ ပျောက်သွားခဲ့ရပါတယ် ။
သေးဆုံးသွားတဲ့ ကစားသမားရဲ့မိန်းမမှာ အကြွေးများစွာနဲ့ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာကို
ဗွိုက်ကာ တစ်ယောက်သိရှိသွားပြီး ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ အခက်အခဲကို
သူတက်ကျွမ်းတဲ့ လက်ဝှေ့ပညာနဲ့ ဘယ်လို ကူညီခဲ့လဲဆိုတာတော့
အောက်က link ထဲမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
Subtitle by linthura1988@gmail.com
File Size - 720p ( 1GB )
File Size - 360p ( 330MB )
3 Idiots India ရုပ်ရှင်လောကမှ ကမ္ဘာကိုထိုးဖောက်ခဲ့ပြီး လူကြီးလူငယ် အားလုံးနှစ်သတ်သဘောကျခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကားထမြှာ လူငယ်...
Kung Fu Yoga - 2017 ဒီနေ့ မှာတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းလောက်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Kung Fu Yoga ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား HD ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်သောေ...
Real Steel - 2011 ဒီနေ့မှာတော့ အာလုံးအကြိုက်တွေ့စေမယ့် စက်ရုပ် အက်ရှင် ဖိုက်တင်ကား အလန်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ စက်ရုပ်...
Fast And Furious 8 ပရိသတ်များ အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Fast And Furious 8 မြန်မာစာတန်ထိုး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Fast And Furious ဆိ...
xXx: Return of Xander Cage - 2017 2017 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့ XXX ဇာတ်ကားသစ်ကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ XXX ဆိုကတည်းက ဘယ်လို ...
Baywatch - 2017
Baywatch - 2017 ( HD ) မစ်​ခ်ျ​... ကမ်း​ခြေ​စောင့်​ကယ်​ဆယ်​​ရေး သမား.... လူတိုင်းရဲ့​လေးစားချင်းကိုခံ ရသူ... အလုပ်​တာဝန်​​ကေ...
The Mummy - 2017 ဒီနေ့မှာတော့ အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ The Mummy 2017 ရုံတင်ကားသစ်ကြီးကို ChannelBurmese ပရိသတ်ကြီးအတွက် မြန်မ...
Annabelle - 2017 HD
Annabelle - 2017 ပရိတ်သတ်တွေ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ သရဲကားလေး အကြည်ထွက်ပြီဖြစ်လို့ ChannelBurmese မှ မြန်မာစာတန်းထိုး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ...
The Great Wall - 2016 တရုတ်ပြည်ရဲ့ မဟာတံတိ်ုင်းကြီး ဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ ။ မဟာတံတိုင်းကြီးကို အခြေခံပြီး ရှေးဒဏ္ဏာရီလာ ပံ...
Copyright © 2015 ChannelBurmese